Sweets ho an'ny ankizy - Fomba hafa mahasalama sy mahafinaritra
Inona no azo atao mba hialana amin'ny fahazaran-dratsy?
Torohevitra maromaro ho an'ny mamomamo mamy tsy misy remorse
Ny ankizy dia tia zava-mamy. Azo antoka toy ny fanamarihana ao amin'ny fiangonana izany. Ary tsy toy ny tamin'ny taloha, dia toa misy ihany koa ny fahafahana miditra amin'ireo trondro kely na aiza na aiza. Izany dia manomboka amin'ny mason'ny ankizy ao amin'ny faktioran'ny supermarket ary manohy ny fety amin'ny ankizy amin'ny tsingerin-tsakafo miaraka amin'ny sôkôla, windbags ary smarties.
Na dia efa voavahantsika daholo aza ny habetsaky ny siramamy ao amin'ny vatana, ny faharesen-dahatra dia olan'ny taranaka misy antsika, izay mitohy amin'ny zanatsika.
Tsy zava-poana nandritra ireo taona vitsy lasa izay dia naheno ny feo fa ny taranaka misy zaza kamboty amin'izao fotoana dia ho faty kokoa noho ny an'ny ray aman-dreniny noho ny tsy fahampian-tsakafo. Amin'ny fotoana izay misy olona an-tapitrisany no mosarena sy maty noho ny tsy fahampian-tsakafo.
Tabera sikola sy rantsan-tanana nasondrotra
Efa ao amin'ny akanin-jaza ankizy natao mahafantatra siramamy sy ny menaka amin'ny sakafo. Koa avia nanova tarehy toy ny sakafo tsy madio ihany no zava-mamy izay tsy dia manao ny ezaka, fa koa momba ny tsara Feno hipoka, maro loko, lazaina fa sakafo ara-pahasalamana toy ny zaza sy ny ankizy Fruchtzwerge saosisy.
Nahoana ny ankizy sy ny olon-dehibe no miverina amin'ny fahazaran-dresaka taloha ary aleony maka ny bara sôkôla noho ny jôgôta voajanahary miaraka amin'ny voankazo vaovao? Ho an'ny iray, dia azo antoka fa ny vanim-potoana. Ny kitapon'ilay sôkôla efa vonona, ny voankazo tsy maintsy sasanao sy tapahinao mba hampiakatra azy ao amin'ny yogourt.
Ankoatr'izany, ny voankazo voajanahary dia lafo kokoa noho ny sôkôla, izay matetika no faharoa ary ampiasaina ho pseudo-argument.
Ny mamy malefaka tsy manadino dia miasa amin'ny sakafo mahasalama. Tian'io lehilahy io ho mamy ny faniriany aminy - ary mamy mamy ny fluid amniotic. Ahoana anefa no ahafahanao mihazona fihetsika mahasalama mahasalama amin'ny hoavy?
Ity ny vokatry ny nanontanian'ny ray aman-dreny. Tsy ampy ny mampianatra ny ankizy indraindray ny fomba mety hiasa. Azo ianarana ny fahazarana mihinana sakafo mahasalama. Manomboka amin'ny latabatra fisakafoana izany.
Ampiasao hanompo kely kely iray aorian'ny sakafo antoandro. Amin'ny lohataona, ny voankazo isan-karazany dia ny voina. Noho izany dia mihamaivana ny faniriana amin'ny zava-pisotro misy alikaola ianao ary miaraka amin'izay dia mitombo ny vitaminina, na dia tsy maintsy mandeha haingana amin'ny sakafo antoandro aza.
Sugar - ny fakam-panahy hafakely isan'andro
Aza manova ny fahazarana mihinana ny fianakavianao amin'ny alina. Mahatsikaiky ho toy ny fitsangatsanganana amin'ny orana izany. Manomboka amin'ny zavatra iray ary tandremo mandra-pahatonga azy ho fahazarana. Aorian'izany, manaova zavatra hafa.
Ataovy azo antoka fa tsy maharesy azy ianao, raha tsy izany dia ho very ny fialan-tsasatrao ho an'ny sakafo mahasalama. Raha manandrana zavatra kely ianao, dia ho fantatr'izy ireo ihany koa ny voankazo, ny zavamaniry ary ny sakafo.
Ny zavatra mbola fantatry ny zanakao, ny safidy lehibe kokoa dia ny hanatsarany ny sakafony amin'ny tenany ihany. Aza hadinoina fa misy legioma maromaro izay somary tia mamy. Pumpkin, carrot ary zucchini dia ohatra vitsivitsy monja.
Ny mofo dia azo atao amin'ny voankazo fa tsy nutella na menaka. Indreto ny tantely, ny pao, ny aviavy na ny poma eo amin'ny tsirin-tsakafo manify.
Wine | Sakafo sy zava-pisotro
Healthy Diet | Sakafo ara-tsakafo
Manamboara sandoka ho an'ny ankizy ao an-jaridaina
Nahoana no lalao lehibe ny ankizy?